8 Zvinhu Zvinokosha Pamusoro peItest Certification Course - ITS Tech School
Iyo ITIL (Information Technology Infrastructure Library) inowirirana iyo inoratidzira IT Service Management. ITIL inotungamirira nhengo dzeTI kuchengetedza mabasa avo pamwe nechepamusoro muhutano uye inozvichengetedza zvakasununguka kuitira kuti dzigone kutsigira munyika inotyisa. Izvi zvinogadziriswa zvakare mu 2011, zvinosanganisira nzira dzakagamuchirwa dzeIIT industry.
ITIL yave iripo kubva ku1980, uye inopfuura masangano e10,000 ari kutevera maIAR service gauges kuwedzera kukwanisa kukwanisa kukwanisa. ITIL Certification chinhu chakakosha chinokosha chekuongorora basa reT IT. Usati wadzokera kuItIL Course kana kuvimbiswa, unofanira kuziva pasi pezvinhu pamusoro peIITIL:
1. ITIL for Goal urongwa:
IYI indasitiri yebasa uye kutarisirwa kwebasa ndiyo inonyanya kukosha nokuda kwekuvandudzwa kwayo. ITIL inovhura nzira dzakagamuchirwa dzekufambira mberi nekuita kwekutarisira kweT SERV. Kutevedzera ITIL kunokonzera kushamwaridzana kweTI mukuderedza kudhura, kuvandudza kubudirira, uye kubviswa. Bhizinesi reTI masangano anowana ruzivo uye ruchirongwa. Panguva iyo sangano reIt rinotora mushure mekutonga kweIITIL, inogona kugadzirisa zvinangwa uye kuidzidzisa nenzira inofadza.
ITIL course inosanganisira pasi pasi modules:
Chirevo kuna ITIL
Kuronga Kuita Basa Rokuchengetedza
Zvishoma Zvishoma Kushanda
Aya majekesi anovhara chimwe nechimwe chezvikamu zvehutungamiri hwebasa iro sangano reTI rinofanira kutora mushure mokutsigira mazano akanaka.
3. Tsika tsika yeIITIL:
Paunenge uri kuronga kutora kuongorora kweTIL Certification, unogona kuchinja nzira yako sezvinoratidzwa nezvinodiwa uye kugadzirisa. Chikamu chako chingave chisingasanganisi kuchengetedzwa kwekuchengeteka kuitira kuti iwe unogona kudzivisa iyo dzidzo.
4. Hapana Nhengo Yomubhadharo:
Kune ITIL, hapana chikonzero chinokumanikidza kuti uwane rubatsiro kune rimwe boka revatrusti. Iwe unogona kusununguka kutora Dzidzo yeIITIL kana ITIL Certification pasina kutendeukira kune chikamu kana kubhadhara mari yekunyora kune chero sangano.
5. ITIL iShoko-Izvimiririra:
ITIL haina rusununguko chero chipi zvacho; akapa kuti inofanira kuitika panguva yakakosha yesangano duku. Nokudaro, inobhadhara mari yezvigadzirwa iwe. Na mahwendefa, unogona kutarisana nemumwe we data yako. Muchiitiko chekuti iwe uri shamwari yakaderera, unogona kutora midziyo shomanana.
6. ITIL Certification Nhamba:
Nheyo yeSheyo inokupa kunzwisisa kwemashoko anokosha uye ine chidzidzo chinokosha. Iwe unofanirwa kugara ITIL Foundation Certification exam.
Unyanzvi hwepamusoro hunoita kuti unzwisise muchiratidzo cheI ITIL. Dhigirii reMuenzaniso ndechimwe chikamu chikuru chekushandisa mazinga.
Mutungamiri Nhamba anokupa ruzivo rwevashandi. Izvi ndezvavo, avo vanozotarisira ITIL kushandiswa kwebasa.
7. ITIL haisi yakangofanana neProject Management
Edza kusaita kukanganisa kutowedzera kutarisira kweIITIL. ITIL inonyanya kukosha pakugovera kushandiswa kwemabasa ekuvandudza mapurogiramu ekupedzisira.
ITIL Exam is a various decision design that necessities you to finish the exam in a hourXCHARXs length. You have to finish 40 different decision inquiries in that time.
ITIL Framework inonyanya kuisa purogiramu yehutano, hurongwa, kuchinja, kushandiswa, uye kushandiswa kwekuvandudza kushumira. Inosanganisira zvidimbu zvakasiyana seZvo Management, Change Management, Release Management, Incident Management, Event Management, Matambudziko ekutungamirira, Service Level Management uye zvakanyanya. Chimwe nechimwe chezvinhu izvi zvinogadzirisa hurongwa hwebasa hwehutano hweT IT hwehutano huri nani. Inzira ye ITIL kana ITIL Certification ichakubatsira kuti unzwisise uye uite tsika idzi zviri nani.
Unogonawo kutarisa: - Chii chinonzi ITIL Certification? Ndiani Achabatsirwa kubva kuItIL® Certification?